रु. २२.१० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन भएको छ। केन्द्रीय बैंकले ट्रेजरी बिल जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो। यसका लागि चैत १५ गते राष्ट्र बैंकले २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। ट्रेजरी बिलको बोलकबोल भोलि चैत १४ हुनेछ। ट्रेजरी बिल १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको...
बैंकिङ प्रणालीमा थपियो एकैदिन रु. १३ अर्ब, सीडी रेसियोमा सामान्य सुधार
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा एकैदिन १३ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हिजो चैत १० गते एकैदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १३ अर्ब रुपैयाँ थपिएको हो। योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ४८ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत चैत ९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ४८ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ...
राष्ट्र बैंकले रु. ३.४५ अर्ब मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्ने
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकको उपादन तथा पेन्सन कोषमा रहेको उक्त रकम मुद्दति निक्षेपका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको हो। जसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरका विकास...
बैंकहरुको निक्षेप एकैदिन रु. १३ अर्बले घट्यो, कर्जाको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीबाट एकैदिन १३ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चैत ९ गते एकैदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप १३ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो। योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ४८ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। गत चैत ८ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप...
बैंकहरुमा रु. १.९३ अर्ब बढी लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी लगानी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकको विभिनन कोषमा रहेको १ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ मुद्दति निक्षेपका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको हो। जसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमा १ अर्ब ५४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ,...
राष्ट्र बैंकद्वारा पुनरकर्जा कार्यविधिमा चौथो संशोधन, ब्याज बढ्यो (दस्तावेजसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ मा चौथो संशोधन गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ मा चौथो संशोधन गरेको हो। अब सोहीअनुसार गर्न गराउन इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना जारी निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा, विशेष...
आउँदो वर्ष शनिबारबाहेक ४४ दिन बैंकका कर्मचारीहरुले बिदा पाउने (सूचीसहित)
काठमाण्डौ । आउँदो वर्ष २०७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले शनिबारबाहेक थप ४४ दिन बिदा पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो वर्षको बिदासम्बन्धी सूचना आज सार्वजनिक गरेको हो। जसअनुसार शनिबारबाहेक आउँदो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले ४४ दिन बिदा पाउनेछन्। जसमा काठमाण्डौ उपत्यकामा मात्रै र सरकारले पछि निर्णय...
रु. ११.८३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ। केन्द्रीय बैंकले ट्रेजरी बिल जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो। यसका लागि आज चैत ७ गते राष्ट्र बैंकले ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल आज सोमबार गर्ने भएको हो। यी ट्रेजरी बिल भोलि चैत ८ गते जारी गरिनेछ। ट्रेजरी बिल १ वर्ष वा १...
रु. ११.८३ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, भोलि बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि चैत ७ गते ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले चैत ८ गते जारी गर्न लागेको ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल भोलि सोमबार गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल आउँदो २०७९ असार...
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले पनि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने
काठमाण्डौ । अब राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले विदेशी मुद्राको सहटी सुविधा पाउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०७८ को एकीकृत इ.प्रा. परिपत्रः १०/२०७८ को दफा १ मा संशोधन गर्दै विदेशी मुद्रा सहटी सुविधा पाउने निकायहरुको सूचीमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई पनि थपेको हो। योसँगै अब राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड...
विदेशी बैंकहरुलाई नेपालमा शाखा खोल्न ल्याइयो सहज नीति, चुक्तापुँजीको सीमा घटाइयो
काठमाण्डौ । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपालमा शाखा खोल्न सहज नीति ल्याइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघिको ‘पोलिसी प्रोभिजन फर ओपनिङ अफिस बाई फरेन बैंक अर फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स इन नेपाल, २०२०’ खारेज ‘फरेन बैंक ब्रान्च लाइसेनिङ पोलिसी, २०२२’ जारी गर्दै विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरलाई नेपालमा शाखा खोल्न सहज...
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्दै, कस्तो छ कर्जा लगानीको अवस्था ?
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिने क्रम बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत फागुन ३० गते एकैदिन बैंकिङ प्रणालीमा ८ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ। योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ४९ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत फागुन २९ गतेसम्म कुल निक्षेप ४८ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ रहेको...
नागरिक बचतपत्रमा आजबाट आवेदन खुला, अनलाइनबाट कसरी भर्ने ? (विधिसहित)
काठमाण्डौ । सरकारको २ अर्ब रुपैयाँको नागरिक बचतपत्रमा आज चैत १ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले चैत ३० गते नागरिक बचतपत्र २०८३ ‘क’ निष्कासन गर्नेछ। यो बचतपत्रको बिक्री खुला भने आज चैत १ गतेदेखि २० गतेसम्म गरिनेछ। पाँचवर्षे यो बचतपत्रको साँवा भुक्तानी २०८३ चैत...
बैंकिङ प्रणालीमा एकैदिन थपियो रु. ८ अर्ब निक्षेप, सीडी रेसियोमा सुधार
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा एकैदिन ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फागुन २७ गते एकैदिन बैंकिङ प्रणालीमा ८ अर्ब निक्षेप थपिएको छ। योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ४८ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत फागुन २६ गतेसम्म कुल निक्षेप ४८ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। फागुन २७ मा...
चैत १ मा राष्ट्र बैंकले रु. १० अर्ब ट्रेजरी बिल जारी गर्ने, बोलकबोल भोलि
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि फागुन ३० गते १० अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले चैत १ गते जारी गर्न लागेको ९१ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल भोलि सोमबार गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल आउँदो २०७९ जेठ ३१ गते परिपक्व...